ဖွင့်လှစ် ပိတ် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဖွင့်လှစ် ပိတ် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
ဖွင့်လှစ် ပိတ် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး ဖွင့်လှစ် ပိတ် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် သငျ့လျြောသော ဘို့ အဖွင့်အပိတ် သေးငယ်သော ဘောလုံးကို / plug ကို vavles နှင့် damper auသို့mတွင်ion.ကျွန်တော်တို့ ပေး AOX-R ကို ကို စီးရီး ဖွင့်လှစ် ပိတ် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r ဘို့ အဆောက်အဦးများ, အပင်များ, steelworks, powerအပင်များ,etc. AOX ကွပ်မျက် အေဂျင်စီများ များမှာ ရရှိနိုင် သို့ နောက်ထပ် ထက် 30 နိုင်ငံပေါင်း။ ကျွန်တော်တို့ များမှာ ကတိသစ္စာပြု သို့ ထုတ်လုပ် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ကွပ်မျက် actuaသို့rs တွင် အနိမ့် စီးပွားရေး စျေးနှုန်းများ ဘို့ အဆိုပါ အကျိုး ၏ ကျွန်တော်တို့၏ cusသို့mers. ကျွန်တော်တို့ များမှာ ကတိသစ္စာပြု သို့ ပေး ကျွန်တော်တို့၏ dဖြစ်tribuသို့rs နှင့် cusသို့mers နှင့် အဆိုပါ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု။
2. Long ကဝန်ဆောင်မှုဘဝကို: Precise ဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများ AOX-R ကိုစီးရီးများအတွက်မြင့်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုသေချာအနီးကပ်လေးပုံတစ်ပုံဖွင့်လှစ်လျှပ်စစ် actuator လှည့်။
3. မထည့်အာကာသအပူပေးစက် - ဒါဟာအိမ်ယာ၏ပြည်တွင်းရေး condensing ကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးခြောက်သွေ့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်အသုံးပြုသည်။
4. အပြည့်အဝရှဉ့်-လှောင်အိမ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်တာပူးတွဲ: AOX-R ကိုစီးရီး၏မော်တာအနီးကပ်လေးပုံတစ်ပုံဖွင့်လှစ်လျှပ်စစ် actuator မြင့်မားစတင် torque ကိုထုတ်လုပ်နှင့်အပူအပူလွန်ကဲရာမှကာကွယ်ပေးမယ့်အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော induction motor ဖြစ်ပါတယ်လှည့်။
high-torque AOX-R ကိုစီးရီးလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်နီးကပ်လေးပုံတစ်ပုံဖွင့်လှစ်မယ့်ဂီယာအုံရှိပြီးယင်းဂီယာအုံအိမ်ရာကျဇယားသံကိုဖန်ဆင်းသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏အခြားမော်ဒယ်များ၏တီကောင်ဂီယာဦးခေါင်းပိုမိုအဆင်ပြေသောကြောင့်ပျက်စီးလိမ့်မည်မဟုတ်, ကျြောလှည့်ရင်တောင်, ဒါကြောင့်ပင်ဒီဘာဂင်၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် 360 ဒီဂရီလှည့်နိုင်ပါသမျှသောအပြည့်အဝတီကောင်ဂီယာအမျိုးအစားများမှာ troubleshooting အဘို့။
AOX, ရင့်ကျက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ် 60,000 AOX-R ကိုစီးရီးတစ်ခုနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူအနီးကပ်လေးပုံတစ်ပုံဖွင့်လှစ်လျှပ်စစ် actuator လှည့်သဖြင့်အဓိကအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများစက်စင်တာ, CNC တွင်ခုံ, CNC ကြိတ်စက်, CNC တူးဖော်စက်, CNC တူးဖော်စက်ပါဝင်သည် မြင့်မားသော, ပလာစမာရေမှုန်ရေမွှားဂဟေဆော်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ရေမှုန်ရေမွှားခြောက်သွေ့လိုင်းနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများ, ကြိတ်, boring, တူးဖော်ခြင်း, ပစ်, ကြိတ်ခြင်းနှင့်စက်ကိရိယာသည်အခြားအမျိုးအစားများကိုသုံးစက်ကိရိယာများကိုကျော် 300 အစုံ, ပစ္စည်းကိရိယာများလူသိများတဲ့ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများသည်အနေဖြင့်ဝယ်ယူနေကြသည်မြင့်မားထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု, processing တိကျမှန်ကန်မှု။
AOX-R ကိုစီးရီးအဆို့ရှင်နှင့်အတူ mounting လျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်နီးကပ်လေးပုံတစ်ပုံဖွင့်ကျယ်ပြန့်ရေကုသမှု, Desalination, စွန့်ပစ်ရေ, မိလ္လာကုသ, ရေလှောင်ကန်, ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှု, ဆည်မြောင်း, ရေပေးဝေရေးနှင့်ရေနုတ်မြောင်း, မီးမသောက်, အိမ်တွင်းကိုရေကဲ့သို့, ရေကုသမှုတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် တိုက်ပွဲတွေ။
Q: ငါတို့သည်သင်တို့၏ AOX-R ကိုစီးရီးအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်သင့်ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်နီးကပ်လေးပုံတစ်ပုံဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသလား?
Q: ငါတို့အဘို့အညာဘက်ကို actuator ကိုရှေးခယျြနိုငျမလဲ
hot Tags:: ဖွင့်လှစ် ပိတ် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်